के नेपालमै इन्टरनेसनल ड्राइभिङ परमिट (आईडीपी) पाउन सकिएला ?
आज विश्वले नै मान्यता दिएको के के छन् हामीसँग ? बुद्ध, सगरमाथा, तिनै सुन्दर भूगोल नै हो नि हैन ? आज विश्वमै पुगेका छन् नेपालीहरु । तिनले ती ३ चिजलाई ती ती देशमा भनेर, व्याख्या गरेर, नेपालप्रतिको श्रद्धा, आस्था र आकर्षण त अवश्य बढाउँछन् । त्यस प्रति ह...
२०७६ मा किया : सदावहार स्पोर्टेजको सदावहार बजार, सेल्टोसको इन्ट्री र चर्चामा निरो ईभी
काठमाडौं – २०७६ साल सकिएर २०७७ प्रारम्भ भएको छ । यो वर्ष नेपाली बजारमा अन्य ब्रान्ड जस्तै किया मोटर्सले पनि फरक पहिचान कायम गरेको छ । कियाको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजले यो वर्ष सधै झै धेरै बिक्री गर्दै आएको...
२०७६ मा टाटा : गेम चेन्जर एच फाइभको इन्ट्री, नेक्सनको बजार विस्तार
२०७६ सालले हामीबाट विदा लिएको छ । यो वर्ष नेपालमा टाटा गाडीको नयाँ कारको रुपमा गेम चेन्जर मानिएको एच फाइभ भित्रियो । यद्यपि बजार विस्तारको आधारमा भने यो भन्दा अघिल्लो वर्ष देखि नै नेपाली बजारमा उपलब्ध नेक्सन एसयूभी अझै सफल रह्यो । नेपालमा टाटा गाडीक...
रिभ्यु २०७६ : लगातार बजार बढाउदै टीभीएस, ३ हजार मेकानिक्सलाई तालिम
टीभीएसले गत वर्ष २०७६ सालमा नेपाली बजारमा ल्याएका बाइक र स्कुटर मध्ये तीन वटा मोडल अपाचे आरटीआर १६० २भी र ११० सीसीको रेडिअन बाइक तथा एनटर्क स्कुटरले राम्रो चर्चा पाए । नेपालमा टीभीएसको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स स्रोतका अनुसार टीभीएसले प्रत्येक व...
कोरोना संकटमा यस्तो छ यातायात व्यवसायीको अपेक्षा
चीनको वुहानमा डिसेम्बर अन्तिममा देखिएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको महामारी भुसको आगो जसरी फैलिइरहेको छ । यो भाइरसले २१ औं शताब्दीको विज्ञानलाई पनि जित्न दिएको छैन । औषधि पत्ता लगाउने वैज्ञानिकहरूको निरन्तरको प्रयासलाई सफल हुन दिएको छैन । नेपाल...
हाल कोरोना भाइरस महामारीको सन्त्रासका बीच विभिन्न ब्यक्तिहरुले आ–आफ्नो तर्फबाट विभिन्न कार्य गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा फक्सवागन गाडीको आधिकारिक वितरक पूजा इन्टरनेसनल नेपालका सीईओ विवेक बिजुक्छेले वैकल्पिक अस्पतालको रुपमा वर्कशपहरुलाई...
लकडाउनमा के गर्दैछन् यी अटोमोबाइल सम्बद्ध ब्यक्तिहरु ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरले गरिएको लकडाउनको सबैले पालना गरिरहेका छन् । आज नयाँ वर्ष २०७७ को पहिलो दिन पनि हो । यो अवस्थामा लामो लकडाउनका दिन अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले कसरी विताइरहेका होलान् ? कतिपय व्यवसायीहरुले फेसबुक र यस्तै सामाजिक सञ्जालमार्फ...
फिचर : निराश रह्यो अटोमोबाइल व्यवसायका लागि वर्ष २०७६, के भन्छन् व्यवसायीहरु ?
आज वर्ष २०७६ को अन्तिम दिन । भोलि देखि नयाँ वर्ष २०७७ प्रारम्भ हुँदैछ । यो अवस्थामा २०७६ सालमा नेपाली अटोमोबाइल बजार कस्तो रह्यो ? के ले असर पु-यायो ? के भन्छन् यो क्षेत्रमा कार्यरत अटोमोबाइल व्यवसायीहरु ? यसको वारेमा चर्चा हुनु आवश्यक छ । गत वर्ष द...
लकडाउनको सदुपयोग, यसरी गर्नुस् अटोमोटिभ फ्याक्ट्री र म्युजियमको भर्चुअल टुर
तपाईं हाल लकडाउनको अवस्थामा हुनुहुन्छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डर छ । तर यसका लागि तपाईंले सावधानी अपनाइरहनु भएको छ । यसमा तपाईं सन्तुष्ट रहनु पर्छ । घरमा त्यत्तिकै बस्नु भएको छैन तपाई । तपाईसँग संसार भ्रमण गर्नका लागि इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छ...